मधुमेह रोगवाट वच्न के गर्ने ? - Nepal Networks <!- Bootstrap CSS -->
मधुमेह रोगवाट वच्न के गर्ने ?
बिरेन्द्र प्रसाद न्यौपाने, मधुमेह रोग एक किसिम को दीर्घकालिन रोग हो। हाम्रो रगतमा सुगर अथवा चिनीको मात्रा बढ्न गय मा यो रोग लाग्ने गर्द्छ । दैनिक हामीले खाने खाना बाट प्राप्त हुने ग्लुकोज हाम्रो शरीर को कोष हरु मा शक्ति को रुप मा परिवर्तन नभयर उत्त ग्लुकोज हाम्रो रगत मा नै रहन्छ र रगत मा ग्लुकोज को मात्र बढ्न जान्छ।
हाम्रो शरीरमा पान्क्रिज नामक एक गर्न्थी हुन्छ त्येसले गर्ने इन्सुलिन नामक हर्मोन को कमी भएमा यो रोग लाग्ने गर्द्छ। बर्तमान समय मा बिश्व मा यो रोग ले व्यापकता लियको छ। हाम्रो देश नेपालमा रोगले आफ्नो ठूलो स्थान बनाएको छ। हामी मानबिय आफ्नै क्रियाकलापले गर्दा नै यो रोग ले जरा फैलाएको पाइन्छ।
बिश्वमा हाल सम्मको तथ्यांकअनुसार मधुमेहको बिरामी ४ अर्ब २५ करोड मानिस मधुमेह को रोगी पाइन्छ। बिश्वको ११ सङठनको तथ्यांकअनुसार सन २०३० सम्म हालको तुलनामा दोब्बर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि यसको संख्या धरै नै भयको पाइन्छ। हाम्रो रहन सहन खानपान जस्तो ब्यबहारिक कारणले यो रोग धरै फैलियको हो। बर्तमान समयमा मानिस हरु धेरै बिलासी जीवन बिताउन चाहने भयकोले विभिन्न रोग ले नि त्यति नै हामी लाई आक्रमण गर्दै छन।
मधुमेह रोक को लक्षण हरु यस्ता हुन्छन ?
मधुमेह रोग लागेको मानिस को मुख्यत मुटु रोग, मस्तिष्क घात, मिर्गौला को रोग , आँखा को रोग, दात को रोग जस्ता अङ्ग मा यो रोगले प्रभाब गर्छ।
यो रोग लाग्दा निम्न लक्ष्मण हरु देखा पर्दछ्न ।
१.बढी तिर्खा लाग्नु,
२. पानी कम पिय पनि बढी पिसाब लाग्नु,
३. काम नगरेपनी बढी थकाइ लाग्नु,
४. आँखा तिर्मिराउनु,
५. हात खुट्टा झम्झम गर्नु,
६. उपचर गर्दा पनि घाउ हरु निको नहुन,
७. शरीर को तौल घट्दै जानू,
जस्ता लक्षण हरु देखा पर्दछ्न ।
यो रोग ले कस्ता ब्याक्ती मा बढी प्रभावित गर्छ त ?
१.मनपरि अनावश्यक खाध्यपदर्थ उपभोक गर्दा
२.मधुमेह भयको बिरामी बाट जन्मे को बच्चा मा
३. शरिरिक ब्याम नगर्ने
४.उमेर अनुसार तौल बढी भएमा
५.उच्च रक्तचाप भएको मा
६. मस्तिष्कघात भएकोमा
७. रगत मा कोल्स्टोरको मात्र बढी भएको र मानसिक असन्तुलन भएको बिरामीमा सुगर अथवा मधुमेह रोग हुने सम्भावना धरै हुन्छ।
यो रोग बाट कसरी वच्न सकिन्छ त ?
मधुमेह रोग एक किसिम को नसर्ने रोग र दीर्घकालिन रोग भएता पनि नियमित सकारात्मक क्रियाकलाप बाट यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तिनी हरु निम्म्न छ्न;-
१. अनावश्यक खाने कुरा हरु नखाने
२ . बिलासी जिवन कम मात्रा मा जिउने। दैनिक नियमित शरिरिक ब्यायम कम्ती मा ३०-६० मिनेटसम्म गर्ने ।
३. सन्तुलन भोजन गर्ने ,बढी ग्लुकोज प्राप्त हुने ( भात ,चिनि, आलु ) जस्ता खाने कुरा कम मात्र मा खाने। बढी चिल्लो भएको खाने कुरा कम खाने।
४.मानसिक तनाब नलिने, सकारात्मक सोच राख्ने
५. शरीरको तौल धेरै भएमा सन्तुलन राख्ने।
६. लागुपदार्थ को सेबन नगर्ने।
७.नियमित स्वास्थ परिक्षण गर्ने ।
यदि हामीले माथी जस्तै तरिकाहरु अपनायौ भने हामी लाई मधुमेह जस्तो जटिल रोग बाट बच्न सक्छौ।
म प्रयोगशालाकर्मी भएको कारणले यो मदुमेह रोगको परिक्षण मैलेनै गर्ने भएकोले मैले दिनौ परिक्षण गर्ने मध्य ८०% बिरामी मधुमेहको पाउछु। त्यसैले सबैले कम्तिमा पनि ३ महिनाको एक चोटि नजिकैको स्वास्थ प्रयोगशालामा गई मधुमेह रोगको परिक्षण गर्न अनुरोध गर्दछु।नियमित औषधि र माथी भनिएको उपाय आपनाउनु भयो भने यो रोग बाट वच्न सक्नु हुन्छ।
-बिरेन्द्र प्रसाद न्यौपाने ताहु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पाल्पा प्रोयगासाला बिभाग मा ल्याब टेक्निसियनको रुपमा कार्यरत छन ।